CRO ဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone အတိုကောက်
Martech Zone » အတိုကောက် » အတိုကောက် C ဖြင့် အစပြုပါသည်။	» CRO
CRO သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ကူးပြောင်းခြင်းနှုန်း Optimization.
ဤအတိုကောက်သည် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် CTAs အပါအဝင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြည့်ရှုရန်အတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
CRO သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်း အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကြီးကြပ်သော အမှုဆောင်တစ်ဦး။